Ukukhula kwedatha kunye nabanikezeli besalathiso kuqhutywa kukunyuka kotyalo-mali lwe-ESG
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukukhula kwedatha kunye nabanikezeli besalathiso kuqhutywa kukunyuka kotyalo-mali lwe-ESG
Utyalo-mali lwe-ESG lukhule lwaya kwiindawo eziphakamileyo ezingazange zibonwe kwiminyaka yakutshanje, ukuqhuba imfuno enkulu enkulu yedatha / ye-analytics ye-ESG kunye nokwandiswa kwesibonelelo se-ESG ukuhambelana neendlela ezahlukeneyo zotyalo-mali. Bobabini abanikezeli beenkcukacha kunye nabanikezeli besalathisi babeka ugxininiso olwandisiweyo kula mahluko ukuze bahambisane nokutshintsha ngokukhawuleza kwe-ESG ye-investment landscape ngokophando olutsha olupapashwe namhlanje nguBurton-Taylor International Consulting, inxalenye ye-TP ICAP's Data & Analytics division, Parameta Solutions.
"Ababoneleli besalathiso bajongana neefowuni zabatyali-mali zokuvezwa okwandisiweyo kwiimali ezinxibelelene ne-ESG, ngakumbi ezo zijolise kwimiba yemozulu, njengoko uzinzo lubekwe phambili phambili kwinkxalabo yoluntu," utshilo uSean Eskildsen, umhlalutyi waseBurton-Taylor. "Ukukhula okunamandla kungenzeka kuqhubeke kwiminyaka ezayo, nangona amanyathelo okulawula kunye neemeko zentengiso ezahlukileyo ziya kuvavanya uluvo lwabatyali mali kwicandelo," wongeza.
"Eqhutywa ngumdla wotyalo-mali ongaguqukiyo kunye nemfuno yoshishino, ababoneleli ngedatha yezemali bagxile ekunikezeni iimveliso kunye nolwazi olunceda abathathi-nxaxheba kwintengiso ukuba bavavanye ukubambelela kwamashishini kwiinkxalabo zendalo, intlalo, kunye nolawulo," utshilo u-Adler Smith, umhlalutyi waseBurton-Taylor, esongeza. ukuba "Le mfuno yedatha ye-ESG / uhlalutyo ivela kuzo zonke iikona zeemarike ezinkulu, kodwa ikakhulu igxile kwicala lokuthenga."
UBurton-Taylor namhlanje ubhengeze ukupapashwa kweengxelo ezimbini ezintsha ezibandakanya isalathisi se-ESG kunye namashishini edatha. Ingxelo ye-ESG Index ihlalutya ingeniso yehlabathi ngumboneleli kwaye inika ukuqonda kubaqhubi bokukhula kwesalathiso se-ESG. Ingxelo ye-ESG Data/Analytics ijonga indima eyandayo yedatha ye-ESG/analytics edlalayo kwiimarike ezinkulu kunye nendlela ababoneleli bedatha abasabela ngayo kutshintsho.